Raiso ny tsara indrindra amin'ny tontolo roa miaraka amin'i Yammer amin'ny orinasanao
Asabotsy, Jona 23, 2012 Alahady Oktobra 4, 2015 Douglas Karr
Talohan'ny resakay tamin'ny Zoma niaraka tamin'i Harold Jarche dia mbola tsy naheno ilay teny akory aho workstreaming. Hatramin'ny volana septambra lasa teo, ny masoivohon'ny varotra anatiny dia voamarina Rowe toeram-piasana. ROWE dia tontolon'ny asa afa-tsy valiny… iray izay anomezana hery ny mpiasa hiasa araka izay tadiavin'izy ireo raha mbola feno ny fepetra takiana amin'ny asa.
Amin'ny maha ekipa kely antsika, ny fanamby iray ananantsika amin'ny ROWE dia ny mifampiresaka. Ny sasany amintsika dia mamaly amin'ny alàlan'ny mailaka, ny sasany amin'ny alàlan'ny telefaona, ary ny sasany tsia (toa ahy!). Rehefa miasa mafy amin'ny asako aho dia halako ny fanelingelenana. Saingy tsy rariny izany ho an'ireo mpanjifako na mpiara-miasa amiko… izay manandrana manenjika ahy indraindray.
Nahamarika olana tamin'ny fikambanana hafa i David izay tsy mamokatra intsony noho ny mailaka be loatra sy ny fivoriana maro loatra… tsy avelan'ny mpiasa hahatanteraka ny andraikitra sahaniny. Nilaza izy fa ny sasany amin'ireo fikambanana dia nitodika tany amin'ny Workstreaming. Raha tsorina, ny Workstreaming dia manome fomba fifandraisana izay tsy manelingelina ny mpiasa fa mbola mamela ireo akaiky anao hahatakatra ny zavatra iasanao, rehefa mety mila fanampiana ianao, ary rahoviana no hanantena valiny. Toa izany Yammer mety ho fitaovana tsara ho an'ity!
Momba an'i Yammer
Yammer dia rindrambaiko bilaogy bitika mora ampiasaina nefa mahery mampifandray ny olona sy ny atiny amin'ny fotoana sy habaka. Miasa mitovy amin'ny Facebook na Twitter izy, ny maha samy hafa azy na dia miasa amin'ny sehatra ho an'ny daholobe aza ny Facebook, i Yammer dia miasa manokana ho an'ny orinasa, mamela ny orinasa hanamboatra rindrambaiko tambajotra sosialy mifototra amin'ny mpampiasa hampifandray ny mpiasa, ny mpiara-miasa amin'ny fantsona, ny mpanjifa ary ny hafa amin'ny sandany rojo.
Ny tambajotra sosialy tsy miankina toa an'i Yammer dia manome tombony lehibe ho an'ny orinasa. Izy io dia mandray anjara sy manome hery ny mpiasa, manafaingana ny fizotran'ny asa, manatsara ny famokarana ary ny fanavaozana ny solika. Ary ny valiny dia saika eo noho eo. Ohatra, i Yammer dia manome fitaovana fiaraha-miasa maharitra sy mahomby hampifandray ny talenta sy ny teknolojia miparitaka erak'izao tontolo izao amin'ny ekipa mpivarotra sy marketing, ahafahan'izy ireo mirotsaka amin'ny paikady ary mandefa fampielezan-kevitra amin'ny fomba milamina.
Ny ahiahy voalohany momba ny tranonkala tambajotra sosialy dia ny filaminan'ny data. Miaraka amin'ny teboka tokana an'ny fahasamihafana an'i Yammer (amin'ny Facebook sy tranokala tambajotra hafa, izany hoe) tsiambaratelo sy fiarovana data, ny vavahady dia mandeha lavitra be mba hiantohana ny filaminan'ny ambaratonga ambony. Yammer dia mampiditra ny fijerena fiarovana amin'ny endrika, endrika prototype, ary ny fametrahana. Ny fifandraisana rehetra dia mandeha amin'ny alàlan'ny SSL / TLS, ary ny data dia mandeha amin'ny alàlan'ny firewall lojika ambany ambany hisorohana ny famoahana ny tambajotra. Ireo mpizara lozisialy tranonkala dia mijanona misaraka ara-batana sy ara-dalàna amin'ireo mpizara data. Ireo fiarovana ireo, miampy fandefasana hafa ny asa fiarovana ny fikosoham-bary toy ny fanaraha-maso horonan-tsary amin'ny famantaranandro, fanidiana hidin-trano biometrika sy paingotra, fanaraha-maso henjana amin'ny fidiran'ny mpiasan'ny mpitsidika, fisoratana anarana fidirana mpitsidika amin'ny antsipiriany, fidirana tokana ary fiarovana ny teny miafin'ny tenimiafina, fanamafisana matanjaka ary manome antoka bebe kokoa ho ambony tsy fandriam-pahalemana.
Miverina amin'ny workstreaming. Raha jerena ireo fanamby amin'ny laharam-pahamehantsika, ny fandaharam-potoana, ny toerana misy antsika ary ny fomba fanao amin'ny asa… ny fampiasana Yammer dia mety ho fomba tsara hifanarahanay rehetra. Raha tokony hiantso ny mpamorona ahy aho dia afaka mijery an'i Yammer fotsiny ary mahita hoe maninona izy na rehefa mety misy! Tsy tombony ho an'ny orinasa kely fotsiny izany… alao an-tsaina ny fitomboan'ny fifandraisana sy ny fihenan'ny tabataba mety hananan'ny orinasa ihany koa!
Samy manana ny azy koa i Yammer fampiharana amin'ny birao sy finday misy, fampidirana Skype, ary endri-javatra maro hafa.
Tags: fifandraisana ara-tsosialyworkstreamingyammer
Nieritreritra momba ny marketing amin'ny Ebooks?
Jun 25, 2012 ao amin'ny 4: 15 PM
Vaovao mahaliana androany fa nividy Yammer i Microsoft. Heveriko fa hetsika goavana izany!
Jun 26, 2012 ao amin'ny 10: 49 PM
Tsy maintsy lazaiko – tena mankafy ity fitaovana ity aho. Ny hany nilaiko dia ny fanosehana. Manapaka ny mailaka, mampahafantatra ny mpiara-miasa aminao, ary mitazona ny tetikasa. Ohatry ny facebook ihany fa ho an'ny toeram-piasana ihany!